Ozi Visa UK - Central School School, Cambridge
Dabere na obodo gị na ogologo oge ị chọrọ ịbịa UK, ịkwesịrị itinye akwụkwọ maka visa. Maka ọnụnọ ruo ọnwa 6 ọ bụ Visa Nleta Ọbịa, yana ọnụnọ nke ọnwa 6-11, Visa Nkuzi Oge Obere. Biko lelee nke a na weebụsaịtị gọọmentị UK www.gov.uk/apply-uk-visa ebe ị nwere ike ịchọpụta ma ịchọrọ visa, ị nwekwara ike itinye ntanetị. Anyị enyochaala saịtị a, ọ bụ ezie na anyị erughị eru inye ndụmọdụ ndụmọdụ gbasara iwu, anyị ghọtara na ọ bụrụ na ịchọrọ itinye akwụkwọ maka visa ị ga-enwerịrị akwụkwọ ziri ezi gụnyere:
Akwụkwọ edemede gị nke kwadoro na a kwadoro gị maka usoro ma kwụọ ụgwọ gị. Akwụkwọ ozi ahụ ga-enyekwa nkọwa gbasara usoro ahụ.
Ihe akaebe iji gosi na ị nwere ego iji kwụọ ụgwọ ịnọ na UK.
Ọ bụrụ na ị nweghị ihe ịga nke ọma n'inweta visa biko zitere anyị otu ụdị akwụkwọ ịjụ visa na anyị ga-eme ndokwa ịkwụghachi ụgwọ akwụ ụgwọ. Anyị ga-akwụghachite ụgwọ niile ọzọ karịa otu izu na ụgwọ ụlọ iji kwụọ ụgwọ mmefu.